The fighting force will our effective driving force Starting in January 2020, an infectious disease called “Novel Coronavirus Infection Outbreak Pneumonia” has occurred in Wuhan, China. The epidemic touched the hearts of people all over the world, in the face...ဆက်ဖတ်ရန် »
The fighting force will our effective driving force Starting in January 2020, an infectious disease called “Novel Coronavirus Infection Outbreak Pneumonia” has occurred in Wuhan, China. The epidemic touched the hearts of people all over the world, in the face of the epidemic, Chi...ဆက်ဖတ်ရန် »
Insulation board believe many people know, in the use of the process, can play an important role, but it is the existence of what use advantage? Today small make up for you to simply introduce this knowledge! Thermal insulation board is made of polystyrene resin as raw material plus other raw mat...ဆက်ဖတ်ရန် »
The plank that extruded sheet manufacturer produces here isakind of brand-new heat preservation material, in the process that USES, it can show good flame-retardant performance, can reduce the circumstance that fire breaks out so, at ordinary times, how do we need to do ability to differentiate...ဆက်ဖတ်ရန် »
HOW DOES INSULATION WORK? An un-insulated home is subject to considerable winter heat losses and summer heat gains. Insulation The term ‘insulation’ refers to materials oracombination thereof which provide resistance to heat flow. When these materials are installed in the roofs, ceilings, wall...ဆက်ဖတ်ရန် »
Current warm insulation materials are common: Polystyrene foam insulation Board (EPS) and polystyrene extruded insulation Board (XPS). Polystyrene foam insulation Board (also known as foam plate, EPS plate) by the containing volatile liquid foaming agent of the expandable polystyrene beads, after...ဆက်ဖတ်ရန် »
Post ကိုအချိန်: ဖေဖော်ဝါရီ-20-2019
1, မြင့်မားသောအပူခုခံနှင့်အတူအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အပူလျှပ်ကာ, အနိမ့် linear, အနိမ့်ချဲ့ထွင်မှုအချိုးအစားသည်တံခါးပိတ် porosity များ၏ဖွဲ့စည်းပုံသည်၎င်း၏ insulator တွင်လည်းများ၏သက်တမ်းနှင့်တည်ငြိမ်ရေးသေချာစေရန်, လေစီးဆင်းမှုအပူလွန်ကျူးရှောင်ရှားရန်, တစ်ဦးလေဟာနယ်အလွှာဖွဲ့စည်းထက်ပို 99% အထိရောက်ရှိခဲ့သည် စွမ်းဆောင်ရည်, နှိုင်းယှဉ် wi ...ဆက်ဖတ်ရန် »
Lipu ရော့ခ်သိုးမွှေးဘုတ် - insulator တွင်လည်းတည်ဆောက်ခြင်းအဘို့သင့်ကိုအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှု
သစ်တစ်ခုအစိမ်းရောင်အဆောက်အဦးပစ္စည်းအဖြစ်ပစ္စည်းစျေးကွက်ရော့ခ်သိုးမွှေးဘုတ်ကိုတည်ဆောက်ခြင်း၏လျင်မြန်သောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာအဆောက်အဦးများအတွက်ကျယ်ပြန့်အသုံးပြုခဲ့ပြီးအတူ။ ဒါကြောင့်သင်ကပစ္စည်းသည်အဘယ်အရာကိုသိပါသလော အခုတော့ယနေ့ငါတို့သည်သင်တို့ကမိတ်ဆက်ပေးမယ့်နေကြသည်။ ရော့ခ်သိုးမွှေးဘုတ်မြင့်မားတဲ့အပူချိန်အရည်ပျော်ပြီးနောက်, ပစ္စည်းအဖြစ် basalt ကိုအသုံးပြုသည် ...ဆက်ဖတ်ရန် »
LIPU insulator တွင်လည်းထုတ်ကုန်အပြည့်အဝ GB ကို / T10801.2-2002 စံကိုလိုက်နာ Market ကစည်းမျဉ်းဥပဒေ, များအတွက်ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအားဖြင့်ပွဲချင်းပြီးစစ်ဆေးမှုများ
မကြာသေးမီကစျေးကွက်စည်းမျဉ်းဥပဒေ, Lipu ထုတ်လုပ်အဆောက်အဦး insulator တွင်လည်းထုတ်ကုန်များအတွက်ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအားဖြင့်စစ်ဆေးခြင်းပြီးနောက်အမျိုးသားရေး GB ကို / T10801.2-2002 "လျှပ်စစ်အပူအသံကာကွယ်မှု Extrusion Polystyrene foam (XPS)" စစ်ဆေးရေးစံတွေနဲ့အပြည့်အဝလိုက်နာ၌ရှိကြ၏။ မတ်လများအတွက်ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေး ...ဆက်ဖတ်ရန် »
Lipu ထိထိရောက်ရောက်လုပ်ကိုင်ဖို့ insulator တွင်လည်းဘုတ်အဖွဲ့အကူအညီနဲ့ကြမ်းပြင်အပူ XPS
Lipu အရှိဆုံးအဆင်ပြေကျန်းမာအပူနည်းလမ်းများတစ်ဦးအဖြစ်ထိထိရောက်ရောက်ကြမ်းပြင်အပူလုပ်ကိုင်ရန် insulator တွင်လည်းဘုတ်အဖွဲ့အကူအညီနဲ့ကြမ်းပြင်အပူ XPS နှေးကွေးစွာအများပြည်သူ၏ဘဝထဲသို့ပေါင်းစည်းထားပါတယ်, ဒါပေမယ့်ကြမ်းပြင်အပူတစ်ဦးအကျိုးခံစားခွင့်အဖြစ်, သင်နွေးဖုံးကွယ်အကျင့်ကိုကျင့်နားလည်ပါသလဲ? ၏လျှို့ဝှက်စီမံကိန်းများ ...ဆက်ဖတ်ရန် »